MID Co., Ltd | Construction
Nan Taw Car Rental
Heavy Equipment Management
Customs Declaration & Clearance
Technological University(TU) Myitkyina Site 100% Complete in 31-7-19
31/07/2019 17/08/2020 MID
မြစ်ကြီးနား နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မြစ်ကြီးနား)တွင် (၃)ထပ်စာသင်ဆောင် ( ၁၉၂’ x ၃၈’ x ၃၆’ ) RC ( ၁ ) လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း… Read More
Building, Construction, Engineering
Ba Maw ECD Office Site 100% Complete in 31-1-2018
31/01/2018 17/08/2020 MID
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ M I D Co., Ltd. တို့သည် ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဗန်းမော်မြို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ရုံး… Read More
Building, Construction, Electrical Power, Engineering, Fire Station
BaMaw Hospital Site 100% Complete in 31-12-2017
31/12/2017 17/08/2020 MID
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ( M I D Co., Ltd. ) မှ ဗန်းမော်ပြည်သူ့ဆေးရုံ( ၂ )ထပ် တိုးချဲ့လူနာဆောင် (၁၅ဝပေ x… Read More
Building, Construction, Engineering, Hospital
Quick Menu Link
MID Co., Ltd. Categories
Electrical Power (6)
Fencing & Gate (1)
Fire Station (2)
MID Co., Ltd.
Myanmar International Development Co., Ltd. originally established as Nan Taw Car Rental Service in 2009. It started operations by car rental service, simultaneously followed by the Heavy Equipment Management, Local Employment Management, Construction Engineering, Real Estate Development, Logistics Management and Customs Declaration/Clearance services.
Visitors today : 5
Total visitors : 209
MID Co., Ltd. Facebook
Address: No.183, Aung Pin Lel Street, Ayesaydi Qrt, Myitkyina, Kachin State.
Call MID Co.,Ltd : (+95) 09776900900
Send Email Us : mid@mid.com.mm
All Rights Reserved © MID Co.,Ltd. 2011 - 2020